Numa, oo ah duufaan aan caadi ahayn, oo ku dhow Griiga iyo Sicily | Saadaasha Shabakadda
Xaaladaha diirran ee badda Mediterranean-ka ay heysato sannadkan ayaa doorbiday sameynta duufaan aan caadi aheyn oo loo yaqaan Numa oo mar hore shan iyo toban qof ku dilay gobolka Attica, galbeedka Athens, taasina waxay sababi kartaa waxyeelo weyn maalmaha soo socda.
Noocyada duufaannada Mediterranean, ee loo yaqaan medicanes, Waxay yihiin ifafaaleyaal aad dhif u ah inay dhacaan, laakiin markay wax dhacaan waxay noqon karaan kuwo waxyeello u geysta duufaannada taas oo ku dhacday xeebaha Ameerika ama Aasiya.
1 Waa maxay daawo?
2 Waa maxay cawaaqibka ka dhalan kara Numa?
3 Roob ma ka da’ayaa Spain?
Daawada waa erey ka dhashay ereyada Mediterráneo iyo Huracán (duufaan af Ingiriis ah). Xitaa sidaas oo ay tahay, waa inaan lagu jahwareerin maxaa yeelay xudunta duufaanta Mediterranean waa hawo qabowhalka duufaanada hawo kulul. Sidaa darteed waa duufaan aan caadi ahayn, oo quudinaysa kuleylka ay baddu soo ururisay.
Waa maxay cawaaqibka ka dhalan kara Numa?
Numa, taas oo ay ugu wacan tahay isku darka hawada qabow ee salka ku haysa iyo biyaha aadka u diiran ee Badda Dhexe, ayaa reebaysa roobab mahiigaan ah. Sidoo kale, Waxaa wehelin doona dabeyl dabayl xoog leh leh, oo 200 kiiloomitir saacaddiiba laga bilaabo Khamiista, oo la gaaro saacadaha ugu mashquulka badan Sabtida iyo Axadda.
Meesha ugu badan ee ay dhibaatadu saameysey ayaa la filayaa inay u dhaxeyso Badda Ioniya iyo Koonfurta Balkans, halkaasoo ilaa 400 milimitir oo roob urursan ayaa la duubi karaa (1 milimitir oo biyaha roobka ah waxay u dhigmaan 1 litir oo biyo ah m2). In kasta oo ay mar horeba geysatay waxyeello weyn: 15 qof ayaa dhimatay qaar badana waa la waayey. Halkaan, waxaan rajeyneynaa in tirooyinkan aysan sii kordhin.
Roob ma ka da’ayaa Spain?
Halkan Spain waxaan ku nool nahay mid ka mid ah abaarihii ugu xumaa ee soo maray taariikhda dalka. Nasiib darrose, Jasiiradda Iberia ama jasiiradaha Balearic iyo Canary midkoodna ma heli doono dhibic keliya oo Numa ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Numa, waa duufaan aan caadi ahayn, oo ku dhow Griiga iyo Sicily